Bugharịa Intel, New Razer Blade 14 Na-emesị Kwadoro site na AMD Ryzen - 【Nkọwa】
Bugharịa Intel, nke ọhụrụ AMA Ryzen na-akwado ihe ọhụrụ Razer Blade 14
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ka AMD nwetara ala na ewu ewu na arụmọrụ, anyị chere mgbe ndị nhazi ya ga-ejedebe na laptọọpụ egwuregwu kachasị adị, yana na E3 2021, nke ahụ bụ kpọmkwem ihe mere Razer Blade 14.
Ekwuputara n'oge ngosi mbụ nke Razer na E3, Razer Blade 14 ga-enwe ihe ngosi AMD Ryzen 9 5900HX na Nvidia GeForce RTX 3080. A ga-etinyekwa ike ahụ niile n'ime obere na 0,6-anụ ọhịa dị mkpa (1,67, 3.92 sentimita asatọ) cm nke etiti) nke naanị 1.78 lbs (XNUMX n'arọ).
N'oge na-adịbeghị anya, e nweela laptọọpụ ịgba chaa chaa 14-anụ ọhịa, ọkachasị na mwepụta nke Intel Intel Tiger Lake-H35 ndị ​​nhazi ọhụrụ. Mana Razer Blade 14 dị mma n'ihi na ọ na-eji obere ụdị ihe ahụ iji wepụta arụmọrụ egwuregwu PC kachasị elu, n'ihi ekele jụrụ ihe Razer.
Otú ọ dị, ọ ga-abịa na-efu. Ntọala izizi, ya na ihe ngosi AMD Ryzen 9, 16GB nke RAM, ihe Nvidia GeForce RTX 3060, na ihe ngosi 1080p 144Hz, ga-eweghachi gị 1,799 1,799 (€ 2,330, AU € 3080). Ma ọ bụrụ na ịchọrọ onye nwere RTX 1440 na ngosipụta 2,799p, ọ ga-efu gị € 1,980 (ihe dị ka € 3,630, AU € XNUMX).
Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ọnụahịa ị dị njikere ịkwụ maka igwu egwu na njem, ị ga-enwe ike ịrịọ ya ugbu a site na weebụsaịtị Razer.
Oge ọhụụ nke laptọọpụ igwu egwu
Na CES 2021, Intel mere ọtụtụ ihe ntoputa nke klas ọhụụ nke laptọọpụ egwuregwu, nke ọ kpọrọ "Slim Enthusiast." N’ụzọ bụ larịị laptọọl na nke na-agba cha cha nke anaghị arụ ọrụ. Ma ugbu a ọ dị ka ọ bụghị naanị Intel.
Anyị ekwuola naanị laptọọpụ ole na ole kwesịrị ịdaba n'ụdị a, ya bụ Asus TUF Dash F15, mana usoro Razer Blade 14 na Alienware X kwupụtara na Computex dị ka laptọọpụ ndị ga-ebu ụzọ. ụdị a na nnukwu ọsọ.
Karịsịa ebe ọ bụ na njem amalitela ịbụ ihe ọzọ, laptọọpụ dị ka Razer Blade 14 kwesịrị inye ndị mmadụ nnukwu laptọọpụ egwuregwu na-adịghị enye ha nsogbu.
Ọ bụghị naanị maka egwuregwu PC kachasị mma, anyị ji n'aka na ndị okike ga-ahụ ụdị ihe a n'anya. Na 9-isi AMD Ryzen 8 processor na Nvidia GeForce RTX 3080, video edezi, nsụgharị, na ndị ọzọ ga-ibu obere.
Naanị ihe nwere ike ime ka ọ daa mbà nwere ike ịbụ ndụ batrị. Razer na-ekwu na Blade 14 nwere ike ịdịru ruo awa 12 n'otu ụgwọ, nke ga-adọrọ mmasị ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ eziokwu. Ma na ihe niile dị elu n'ime, anyị chere na ọ ga-esi ike itinye nnukwu batrị n'ebe ahụ. Anyị ga-ahụ otu ihe laptọọpụ laptop a nwere siri ike mgbe anyị nyochara ya maka nyocha zuru ezu.
Mana ọ bụrụ na laptọọpụ ụdị egwuregwu ahụ dị mfe na ọkụ nwere ike ịnapụta ezigbo arụmọrụ yana ndụ batrị mara mma, ọ ga-abụrịrị akụkụ akụrụngwa na-atọ ụtọ.
Onyinye kachasị mma nke oge maka Razer Blade 15